China akpaaka akụkụ arc ịgbado ọkụ robot emeputa na soplaya |Yunhua
Mbelata ụgwọ ọrụ
Mbelata mmerụ ahụ ndị ọrụ site na mmegide ugboro ugboro
Mbelata ụgwọ nkwụghachi ụgwọ
Belata oge mmepụta furu efu
Ibelata mperi yana mmebi ngwaahịa
Mbelata ngbanwe nke ndị ọrụ & ego njikwa
Ọbara weld abawanyela
Mmụba ngbanwe weld
Uru asọmpi bara ụba
Welding robot nrụpụta
Dị ka otu n'ime ndị na-ewu ewu ulo oru ịgbado ọkụ robot, o nwere streamline ogwe aka na
min nnyonye anya na max mgbanwe,
ike ịgbado ọkụ ugbu a voltaji na waya nri nwere ike ịchịkwa ozugbo.
Enwere ike ịtọ paramita ịgbado ọkụ nke ahịrị ịgbado ọkụ ozugbo na pendant nkuzi nke robot.
N'ụwa ọgbara ọhụrụ a na-eji nkà na ụzụ eme ihe, ndị rọbọt na-ekere òkè dị ukwuu n'ichepụta ihe dị ka ọkara nke ndị a na-eji maka ịgbado ọkụ.Ọtụtụ n'ime ndị ahụigwe ịgbado ọkụ a na-eji ya na ụlọ ọrụ ụgbọ ala.N'ime afọ 30 gara aga robots ịgbado ọkụ ụgbọ ala anọwo na-arụsi ọrụ ike na-agbanwe ụlọ ọrụ ahụ.Ha emeela ahịrị mgbakọ ụgbọ ala ngwa ngwa ka ọ dị nchebe, ọnụ ahịa dị irè na nke ọma.Ihe ndị a bụ isi ihe kpatara rọbọtị ụgbọ ala ji bụrụ ihe kacha mkpa n'ịgbanwe ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
anyị na-echepụta ụfọdụ sel ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma na nke dị n'ahịa taa.Site na usoro ịgbado ọkụ nke robotic anyị, anyị na-enye ndị na-emepụta ụgbọ ala ihe ngwọta a pụrụ ịdabere na ya nke nwere ike ime ka puku kwuru puku akụkụ ha chọrọ ka ọ dịkwuo elu, na-agbanwe agbanwe ọsọ ọsọ, na-ejigide ogo kachasị elu nke ngwaahịa ngwaahịa na nkwụsi ike.
'+ 80º ~ -150º
'+ 125º ~ -75º
Onye na-ebelata RV
1. The isi Ọdịdị nke RV reducer bụ tumadi esịnede nnyefe akụkụ worm gia, aro, ibu, igbe na ngwa.
2. Ọ nwere ike kewaa atọ isi structural akụkụ: igbe ahụ, worm gia, ibu na aro Nchikota.
3. RV reducer nnyefe kwụsiri ike, vibration, mmetụta na mkpọtụ bụ obere, ya mbelata ọnụego bụ nnukwu,
N'inwe ihe karịrị 100 isi ikike ikike ọgụgụ isi nwere onwe, Ruking nwere karịa ndị mmekọ 100, netwọk ahịa ya na-ekpuchi ihe karịrị mpaghara 50 gburugburu ụwa.Otu ahụ na-agbaso usoro R&D nke ụwa ma nwee ISO9000 na ISO / TS16949 àgwà sistemụ.
LNC bụ akara sistemụ njikwa 1 kacha elu na Aisa, ma nwee teknụzụ njikwa njikwa dị mma nke gantry, SCARA, delta na robots njikọ 6 iji gboo ụdị niile achọrọ sitere na ngwa ụlọ ọrụ dị iche iche, dị ka mgbakọ, nnwale, ngwugwu, njikwa ihe na nhazi. .Anyị na-enye usoro ngwaahịa ọkọlọtọ zuru oke yana ọrụ ntinye iji gboo ihe ndị chọrọ nhazi.
Robot Yooheart ga-enyocha ihe niile na-abata, yana ihe ziri ezi chọrọ bụ 0.01mm.Naanị ngwa robot ahụ nke na-emezu ihe achọrọ ga-abanye na njikọ na-esote maka nrụnye.
Nzaghachi omume ngwa ngwa
Na ọkwa na-eduga na mba ahụ
Nabata nhazi dị elu
Nhazi ahụ dị fechaa
Q. Olee otú ọtụtụ mpụga axis Yooheart nwere ike tinye?
A. Ugbu a, Yooheart robot nwere ike tinye 3 ọzọ mpụga axis na robot nke nwere ike imekota na robot.Ya bụ, anyị nwere ọkọlọtọ robot ọrụ ọdụ na 7 axis, 8 axis na 9 axis.
Q. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakwunye axis na robot, enwere nhọrọ ọ bụla?
A. Ị maara PLC?Ọ bụrụ na ị maara nke a, anyị robot nwere ike na-ekwurịta okwu na PLC, wee nye PLC akara iji jikwaa mpụga axis.N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike tinye 10 mpụta axis.Naanị ụkọ nke ụzọ a bụ na axis mpụga enweghị ike imekọ ihe ọnụ na robot.
Q. Kedu ka PLC si akpakọrịta na robot?
A. Anyị nwere i / O bọọdụ na ụlọ ọrụ njikwa, enwere ọdụ ụgbọ mmiri 20 na ọdụ ntinye 20, PLC ga-ejikọ bọọdụ I / O wee nweta akara sitere na robot.
Q. Anyị nwere ike itinyekwu ọdụ ụgbọ mmiri I/o?
A. N'ihi na nanị weld ngwa, ndị a I / O ọdụ ụgbọ mmiri ezuru, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ, anyị nwere m / O ịgbasa osisi.Ị nwere ike itinye ntinye na mmepụta 20 ọzọ.
Q. Kedu ụdị PLC ị na-eji?
A. Ugbu a, anyị nwere ike jikọọ Mitsubishi na Siemens na ụfọdụ ndị ọzọ ụdị.
Nke gara aga: 4 Axis Stamping Robot Maka igwe pịa
Osote: 6 DOF 165kg na-akwụ ụgwọ Robotic Palletizer
Akụkụ akpaaka ịgbado ọkụ
Robot ika China
Mig ịgbado ọkụ
Ebe ịgbado ọkụ nke Robot
robotic ịgbado ọkụ ngwọta
Ngwa igwe mgbatị ahụ Arc robot ịgbado ọkụ